ဘေဘီလေးတွေ သွားရည်အများကြီးကျတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? - Chit MayMay
Home Child Care ဘေဘီလေးတွေ သွားရည်အများကြီးကျတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ?
ဘေဘီလေးတွေ သွားရည်အများကြီးကျတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ?
သားသားမီးမီးလေးတွေ သွားရည်အများကြီးကျတာ ဘာ့ကြောင့်လဲ? ဆိုတာကို မိဘအများစု သိလိုကြပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ဒီကိစ္စကို မေမေတို့ မစိုးရိမ်သင့်ပါဘူး၊ ဘေဘီလေးတွေဟာ အသက် ၂လအရွယ်ခန့်မှာ သွားရည်စကျလာပါတယ်။ ဒါကလုံးဝပုံမှန်ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘေဘီလေးက အမြဲတမ်းသွားရည်အရမ်းကျတယ်၊ သူတို့လက်တွေပေါ်မှာ၊ ပုခုံးတွေပေါ်မှာ၊ အိပ်ရာခင်းနဲ့ သူတို့နားမှာ တံတွေးတွေ ပေနေတတ်တာကို မြင်ရင် မေမေတို့အနေနဲ့ စိုးရိမ်ပူပန်မှု ခံစားရပါလိမ့်မယ်။ ကလေးတွေ သွားရည်အရမ်းကျတာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး စိုးရိမ်စရာမလိုပါဘူး။ သဘာဝတရားအကြောင်းတရားတွေက ဒီယန္တရားနောက်ကွယ်မှာရှိပါတယ်။
များသောအားဖြင့် ကလေးတွေမှာ သွားရည်ကျတာက ပုံမှန်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါက သွားပေါက်ခြင်းနှင့်မျိုချဖို့ သင်ယူခြင်းကဲ့သို့သော ဘဝအဆင့်ရဲ့ ပုံမှန်ဖြစ်စဉ်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ မွေးခါစ ဘေဘီလေးတွေမှာ သွားရည်အများကြီး မကျတတ်ပါဘူး။ ဒါက သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ဟာ အစမှာ တံတွေးအများကြီး မထုတ်လုပ်နိုင်သေးလို့ပါ။ အချိန်ကုန်လွန်လာတာနဲ့အမျှ တံတွေးထုတ်လုပ်မှုက တိုးလာပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကလေးတွေ (၁၀)ပတ်ခန့် ရောက်လာတဲ့အခါ တစ်နေ့ကို အကြိမ်များများ သွားရည်ကျလာတာပါ။
ကလေးငယ်တွေ ဘာ့ကြောင့်သွားရည်အများကြီး ကျရတာလဲ?
ကလေးတွေက လူကြီးထွေထက် တံတွေးပိုထုတ်လုပ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ မျိုချဖို့ သင်ယူနိုင်ခြင်း မရှိသေးတာကြောင့် ပါးစပ်ထဲကနေ ထုတ်ပစ်လိုက်တာပါ။ အရွယ်ရောက်ပြီးသူတစ်ယောက်ဟာ အိပ်ပျော်နေတဲ့အချိန်မှာ ခုနစ်မိနစ်မှ ရှစ်မိနစ်တိုင်း ၊ နိုးနေတဲ့အချိန်မှာ လေးမိနစ်မှ ခြောက်မိနစ်တိုင်း တံတွေးကို မျိုချတတ်ကြပါတယ်။ ဘေဘီလေးတွေက မျိုချမှုကို မကြာခဏ မလုပ်နိုင်သေးတာကြောင့် သွားရည်ပိုကျရတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေ သွားရည်ကျရတဲ့ အခြားအကြောင်းပြချက်တွေ ရှိပါသေးတယ်။ အကြောင်းပြချက်တွေထဲက တစ်ခုကတော့ သွားပေါက်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ မက္ကဆီကို အထွေထွေဆေးရုံ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာဂျာနယ်မှာ ဖော်ပြခဲ့တဲ့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ၃လသားအရွယ်ကစပြီး သွားဖုံးရှိ လှုပ်ရှားမှုတွေက ပထမဆုံးပေါက်မယ့် သွားရဲ့ အသွင်အပြင်အတွက် လမ်းခင်းပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ဒီကိစ္စမှာ တံတွေးက ချောဆီအဖြစ် လုပ်ဆောင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် တံတွေးမှာ သွားပေါက်နေစဉ်အတွင်း ပိုးကူးစက်မှုကို တားဆီးပေးတဲ့ အင်ဇိုင်းများ ပါရှိပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သွားအသစ်တစ်ခု ထွက်လာတိုင်း ကလေးငယ်တွေဟာ သွားရည်ပိုကျတာဖြစ်ပါတယ်။ အလားတူပဲ ကလေးတွေကို ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးတဲ့အခါ သူတို့ရဲ့ အရသာဖုသီးလေးတွေက တံတွေးကို ပိုထုတ်လွှတ်ပေးပါတယ်။ ဒီကိစ္စမှာ ကလေးက မဝါးနိုင်သေးတာကြောင့် တံတွေးက အစားအစာတွေကို ရောနှောသွားအောင်၊ ပြိုကွဲသွားအောင် ကူညီပေးပါတယ်။
ဘေဘီလေးတွေ အလွန်အကျွံ သွားရည်ကျတာက ဘယ်လောက်ကြာသလဲ?
ကလေးတွေ သွားရည်အရမ်းကျတာ ဘယ်အချိန်မှာ ရပ်တန့်သလဲ ဆိုတာကို အတိအကျ မသိကြပါဘူး။ သို့သော် ၁၈လအကြာမှာ တံတွေးထုတ်လုပ်မှုက သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားပါတယ်။ တစ်ချို့ကလေးတွေကတော့ ၁၂လသားအရွယ်မှာသွားရည်ကျတာကို ထိန်းချုပ်နိုင််ကြတာကို တွေ့ရပါတယ်။
ကလေးငယ်တွေ သွားရည်ကျရဲ့ အကြောင်းရင်းမှာ ကျန်းမာရေးပြဿနာတွေနဲ့ ဆက်စပ်မှု မရှိသလောက်ဖြစ်တယ်လို့ Pediatrics & Child Health မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ တကယ်လို့ ကလေးက သူတို့ပါးစပ်ထဲ လက်မထည့်ကြသည့်တိုင် သွားရည်ကျတယ်၊ အစာလည်းကောင်းစွာ မစားဘူးဆိုရင် တစ်ခုခုမှားနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ တံတွေးမျိုချတဲ့အခါ နာကျင်မှု ခံစားရသော လည်ချောင်းနာနေ (သို့) ပါးစပ်အနာပေါက်နေတဲ့ လက္ခဏာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကလေးက အသက် သုံးနှစ်ကျော်မှ သွားရည်ကျနေဆဲဆိုရင် ဒါက မျိုချရ ခက်ခဲခြင်းရှိနေတဲ့ လက္ခဏာတစ်ခု ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက သူတို့ရဲ့ ဖွံ့ဖြိုးမှုကို အဟန့်အတားဖြစ်စေတဲ့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေး ရောဂါတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စတွေမှာ ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နဲ့ သွားပြရပါလိမ့်မယ်။
Previous articleသင်ဟာ မိဘတစ်ယောက်အနေနဲ့ ထူးချွန်ပြောင်မြောက်သောအလုပ်ကို လုပ်နေတဲ့ လက္ခဏာ (၆)ချက်
Next articleမေမေတို့အတွက် အလုပ်နဲ့ မိသားစုကို ဟန်ချက်ညီစေနိုင်မယ့် နည်းလမ်း(၈)ခု
ဘေဘီတို့ မြန်မြန်အိပ်ပျော်စေဖို့ မေမေတို့လုပ်မိတတ်သော အမှားများ
ဘေဘီလေးတွေကို ပိုနားလည်ပေးနိုင်မယ့် ဘေဘီလေးတွေနဲ့ ပတ်သတ်သော လူသိနည်းတဲ့ အချက် (၉)ချက်